MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TREE TREE WALKER COONHOUND DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Tree Tree Walker Coonhound Dog
Roscoe the Treeing Walker Coonhound at 2 sano jir— 'Roscoe ma ciyo, wuu qayliyaa oo wuu ooyaa.'
Liistada eeyaha Treeing Walker Coonhound Mix eyda
The Treeing Walker Coonhound wuxuu leeyahay garbi karbaash leh. Dhegaha waa weyn yihiin marka la barbar dhigo madaxa. Bishimaha kore waxay si fiican u laalaadaan daanka hoose. Xididdada hore waa dherer, toosan iyo caato. Koodhka jilicsan waa hagaagsan yahay dhalaalaya wuxuuna ku yimaadaa qaab saddex-geesood ah iyo midab midab leh. (Tricolor waxaa doorbidaya kuwa wax yaqaan.) In kasta oo ay ku timaaddo midab cadaan ah iyo mid cad, waa in aan waligiis loogu yeerin 'casaan,' si looga sooco Redbone Coonhound.
Geedka Coonhound wuxuu ku wanaagsan yahay carruurta oo wuxuu la macaamilaa eeyaha kale. Tababbarka waxaa lagu dhammeeyaa dhibaato yar, maadaama eeyahaani ay awoodaan inay wax ka bartaan tusaale ahaan. Waxay ugu horreyn shaqeynayaan oo ey ugaarsadaan, laakiin sidoo kale waxay sameyn doonaan eeyo wehel ah. U shaqeynta, loo yaqaan 'Treeing Walker Coonhound', maahan shaqo ee waa isboorti iyo leexsi. Waxay ku kobcaan feejignaan joogto ah oo ballaaran. Walker Walker wuxuu noqon doonaa mid sarreeya oo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Jacaylka iyo xiisaha u qabo inuu ka farxiyo, Socodka Geedku waa mid caqli badan, xirfad iyo kalsooni leh. Qaarkood waxay yiraahdaan inay yihiin noocyada ugu fiican ee tijaabooyinka duurjoogta sababtoo ah xawaaraha ay leeyihiin, awoodda ay ku heli karaan si dhakhso leh iyo awoodda dhir wanaagsan. Waxay ku dheereeyaan iyagoo leh dareen aad u wanaagsan oo ur iyo qaylo gooni ah. Bulsho ku barbaar adigoo da 'yar.
Dhererka: 20 - 27 inji (51 - 69 cm)
Nooc caafimaad oo caafimaad qaba.
The Treeing Walker Coonhound laguma talinayo nolosha guriga. Sheybaareyaashan ayaa aad uga walaacsan inay jiifaan hareeraha guriga xaafadaha ama dhismaha. Waxay ku habboon yihiin cimilada kulul, qoraxdu.
Eygan oo aad u walaacsan oo firfircoon ayaa loo soo saaray jimicsi jireed oo daran. Coonhounds waxay ku dhashaan ugaarsato dabiici ah, sidaa darteed waxay u janjeeraan inay cararaan oo ugaarsadaan haddii aan si fiican loo deyn inta ay jimicsiga ku jiraan. Ma lahan dareen waddo haba yaraatee, marka waa in lagu hayaa jawi nabdoon. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, kacsan, socod dheer ama orod . Coonhounds oo aan helin jimicsi maskaxeed iyo jir ahaaneed ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo sarreeya oo xitaa wax burburiya.
Qiyaastii 12-13 sano.
maxaa hawaangiga lagu qasay
Geedku waa nooc daryeel fudud ah. Shanlaab mar mar iyo cadayasho ayaa loo baahan yahay oo kaliya. Si joogto ah u hubi dhegaha si aad u aragto wax calaamado ah oo infekshan ah oo hubi inaad nadiifiso gudaha dhegaha. Maydho oo keliya markii loo baahdo. Noocani waa celcelis daadiya.
Socodka Geedka waa farac ka mid ah Ingiriisi Foxhound , oo uu Thomas Walker u soo dhoofiyay gobolka Virginia sanadkii 1742. Waqtiyada 1800-yadii, eey loo yaqaan 'Tennessee Lead,' eey la xaday oo aan la garanayn halka uu ka soo jeedo, ayaa loo tallaabay Walker Hound. Wuxuu ahaa eey awood badan, ku fiican dareenka ciyaarta, wadista iyo xawaaraha, oo leh af cad oo gaagaaban. Walker Walker looma aqoonsan inuu yahay isirkiisa illaa 1946. Tartankan tooska ah ayaa noo keenaya ugaadhsade hufan. Coonhound-kan ayaa hayey muuqaalkii awowgiis, the Ingiriisi Foxhound . Dareen hoose oo ciyaar ah oo ay weheliso xawaare aan daalin iyo wadis raganimo ayaa ka dhigaysa tan aan la joojin karin. Nasabka coonhound runti kuma joogsanayo Walker, ugaarsadayaasha Mareykanka sidoo kale waxay shaqaaleeyaan noocyo kale sidoo kale. Mid ka mid ah coonhound noocan oo kale ah waxaa loo yaqaan Running Walker. Geedka Walker Coonhound waa ugaarsade wax ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo dabocase , dabagalo iyo ootasmo. The Treeing Walker 'geedaha' wixii uu ugaadhsaday, ka dibna mararka qaarkood waxay gebi ahaanba fuuli karaan geedka si ay ugu soo baxaan. Tababbar yar, si kastaba ha noqotee, waxay iska fogeyn doontaa qayladeeda gaarka ah, iyadoo u sheegaysa ugaadhsadaha in ugaadhsigii geeska la geliyay.
xadka collie yellow shay mix
'Kani waa Clary's HiSpeed ​​This Buds 4 U, oo si kalgacal leh loogu yaqaan' Bud 'guriga. Bud waa Geed Walker Coonhound. Isagu waa diiwaangashan yahay UKC / AKC. Bud waa Horyaal Isbadal doonka UKC, Bench Show Champion iyo AKC Grand Show Champion. Halkan, wuxuu xirfadiisa ku soo bandhigayaa darbiga Lovers Leap. '
Clary's HiSpeed ​​Tani Buds 4 U, oo si kalgacal leh loogu yaqaan `` Bud, '' geed dhiggiisa
'Kani waa Hardwood Hi-Voltage, oo kalgacal loogu yaqaan' Pete 'guriga. Pete waa Geed Walker Coonhound. Isagu waa diiwaangashan yahay UKC / PKC. Pete waa horyaal UKC Nite iyo Grand Show Champion. '
Molly the Treeing Walker Coonhound oo 4 jir ah— Waxaan helay Molly markii ay jirtay 1 sano iyada oo loo marayo koox samatabbixin xayawaan ah oo ka baxday San Francisco. Waxay ka soo badbaadiyeen hoy ay xayawaan ku hoydaan. Waxay hadda ku dhowdahay 8 sano iyo eyga ugu fiican. Molly si fiican ayaa looga yaqaanaa magaalooyinkeena oo dhan socodkeena maalinlaha ah, halkaas oo ay hubiso in qof walba ogyahay sida ay u jeceshahay in la xoqdo oo la xoqo.
Molly the Treeing Walker Coonhound oo ah 4 sano jir
Tugger the Walker Coonhound qof weyn
Kani waa Geed-socod Walker oo geed-goos ah.
Tugger the Walker Coonhound oo ah arday yar
Caasha waa Tugger hooyadeed.
Chloe waxay ku taal bidix wajiga wajiga madow, iyadu waa iskujir Treeing Walker Coonhound (oo laga yaabo inay tilmaam tahay ama nooc spaniel ah). Lucy, oo dhanka midig ka xigta, waa daahir curyaan ah oo Walker Coonhound ah.
Chloe iyo Lucy
Kensington waxay jeceshahay raacitaanka gawaarida, gaar ahaan markay madaxa ka saarto saqafka dayaxa!
Jack the Treeing Walker Coonhound oo 4 jir ah oo laftiisa ku calalinaya sariirta eygiisa— Waxaan ka qaadanay Jack bishii May ee sanadkan bulshada nashville. Jack waa geed weyn oo Walker Coonhound oo culeyskiisu yahay qiyaastii 72 lbs. Laakiin isagu waa socod lugeeye marna maraya. Wuxuu jecel yahay inuu ul ku soo qaato runtiina wuxuu ku raaxeeyaa lafihiisa weyn. Wuu fiicanyahay gabadheyda 3 jirka ah, ee la baray in eeyadu aysan jeclayn isla waxyaabaha aan sameyno. Waa dulqaad badan yahay, naxariis badan yahay, gabi ahaanba daacad u yahay waxna ka jeclaan maayo maalmaha shaqada (deyrka ama gaariga weyn). Dhegihiisa jilicsan iyo carafkiisa eygu waa waxa iigu horreeya ee aan arko subaxa hore. Wuxuu sidoo kale saaxiibbo weyn la yahay bisadeena reerka (Poppy), wuuna ogyahay inay mas'uul ka tahay (hoosteyda hoostiisa) wuuna qiimeeyaa booskeeda ilaa ay rabto inay la ciyaarto mooyee. Wuxuu jecel yahay inuu ku ordo baarkinka eeyga oo leh coonhounds kale. '
Jack the Treeing Walker Coonhound oo 4 jir ah oo la seexanaya bisadda
Jack the Treeing Walker Coonhound oo 4 sano jir ah oo seexanaya
cufnaanta flanda french french
Jack the Treeing Walker Coonhound oo 4 jir ah
Eeg tusaalooyin dheeraad ah ee Treeing Walker Coonhound
Geedaha Walker Coonhound Sawirada 1
Geedaha Walker Coonhound Sawirada 2
pitbull eey madow iyo cadaan ah
japanese chin boston terrier mix
Pyrenees weyn iyo isku dhafka collie
wanaagsan oo Pit iyo isku dhafka sarkaal oo dahab ah